Mahagaga fa mahita tanora IITians manana IIM an-tsaina: Sundar Pichai - ITS
Kharagpur: Niaiky izy fa nampiasa kilasy famaranana teo anivon'ireo andro fanorenany tao amin'ny IIT Kharagpur, ny talen'ny Google Google Sundar Pichai tamin'ny alakamisy dia nampiaiky fa nahita ny IITiana tanora izay midika hoe miditra ao amin'ny IIMs, na dia niahiahy momba ny dikan'ny hoe traikefa tena izy aza.
"Be dia be ny lanjany haka aorian'ny fandaminana fitsipika iray manontolo amin'ny alalan'ny asanao (any India). Rehefa any am-pianarana ianao dia mihevitra ny fianarana. Mahatsiaro tena aho fa ny olona dia miditra ao amin'ny IITs ary avy hatrany dia mieritreritra ny IIMs sns. Tena manan-danja tokoa ny fanandramana azo antoka, "hoy i Pichai tao amin'ny fivoriana iray manan-danja tamin'ny IITiana androany.
Miverina amin'ny sehatra 23 taona taorian'ny fiatrehana ny B.Tech tao amin'ny 1993, dia nilaza izy fa ny investudies dia mampiasa vola be dia be ao anaty boky ary mampifanaraka an-tsokosoko.
Nandritra ny fialantsasatra nostalgic ny hahatsiaro ny foto-keviny, dia nankany amin'ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny izy, nihaona tamin'ireo mpampianatra ary nifanaraka tamin'ny tsikombakomba.
"Mazava ho azy," hoy ny valinteniny rehefa nanontaniana izy raha niraikitra ny kilasy.
"Matetika izahay no nitaintaina nandritra ny fotoan'ny hariva, ary tsy nianatra ny maraina", hoy izy nanazava.
Nilaza i Pichai fa nihomehezany ny fihainoana fa ny fahatarana faha-90 taona dia efa vonona ny IITs.
"Tao anatin'ny fotoana niainako dia nilaza ny olona tsirairay fa tsy niditra ity sekoly ity ary izany no fiafaran'ny làlana ho azy", hoy izy nanazava.
Nampianatra tsianjery momba ny toerany amin'ny fizarana diplaoma izy mba hanandrana zavatra maro samihafa, mivoaka eo amin'ny rantsana, mandanjalanja ary maka aorian'ny hafanam-pony.
India, na izany aza, hoy izy, hoy izy, dia manana fiorenam-piorenana miorina amin'ny fampianarana amin'ny maha-mpiambina azy dia miady hevitra tsy tapaka.
Ao Amerika, hoy i Pichai, ao Stanford, ohatra, ny tsikombakomba dia misafidy lehibe indrindra raha vao tamin'ny herintaona.
Taorian'ny famaranana ny B.Tech amin'ny toeram-pitrandrahana metiorika sy ny fitaovam-pitaovan'ny IIT, dia nanao ny MS in Engineering sy Material Science avy ao amin'ny Stanford University sy ny MBA avy ao amin'ny Wharton School i Pichai ary niaraka tamin'ny Google tao amin'ny 2004.
Amin'izao fotoana izao dia teo am-piandohana no nahatonga azy ho tara-panambadiana niaraka tamin'i Anjali, mpiara-mianatra taminy, ary nanambady azy tatỳ aoriana.
Nodinihany ny fomba nandehanany nankany amin'ny trano fivarotam-behivavy tanora mba hihaona aminy ary nahatsiaro ho afa-baraka raha nisy olona nitabataba, nilaza "Anjali Sundar niantso anao".
Taorian'ny nandoroany nandritra ny efatra taona niavaka teny an-kianja, hoy izy, nahatsapa ho mahonena izy tamin'ny fotoana nitadiavana fotoana hisintaka.
"Tsy mampino ny hamerenana ny 23 taona aorian'ny zava-misy," hoy i Pichai nafana fo.